Ibsaa Jireenyaa - Page 34 of 62 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
April 21, 2019 Sammubani Leave a comment
3. Ragaa tartiiba fi Sirna Qabsiisuu
April 16, 2019 Sammubani Leave a comment
Alhamdulillahi wa salaamun alaa ibaadihillaziina-sxafaa (Faaruun hundi kan Rabbiiti. Gabroottan Isaa kanneen Inni filate irratti nageenyi haa jiraatu). Rabbii Tokkichatti amananii Isaaf harka kannuu fi ajajamuun shakkii, jeequmsaa fi dhiphinna hangana hin jedhamne irraa nama baraara. Sababni guddaan namni jireenya keessatti mi’aa tasgabbii dhabuuf Rabbii isaa irraa waan garagaluufi. Gammachuu fi tasgabbiin guutuun inni jireenya keessatti barbaadu isaaf galma kan gahuu yommuu inni Rabbii isaatti shakkii tokko malee amanee fi Isaaf ajajameedha. Kutaa darbe irraa itti fufuun ragaa lammataa haa ilaallu: